Mahombe Makuru! - Uyu mutengesi weAmerica akagadzira kambeyini iyo yaunza ruzivo rwezuva nezuva pamusoro pezvipo uye madhiri kune vatengi. Ichi chigadzirwa chekugadzira chakasanganisa inotsvedza gallery yezviratidzwa nemifananidzo pane yega furemu, iine yakasarudzika, yehupenyu chinhu chezororo chekuita nevatengi zvakanyanya. A shop ikozvino kufona kuti chiitwe (CTA) bhatani rakazotungamirwa kune iro peji rekutenga kwechigadzirwa. Uku kwaive kwakabudirira kwazvo kugadzira mukubatanidzwa kwevakawanda vezvenhau kugona uye kunakidza, quirky mifananidzo.
NYAYA - mutengesi wepasi rese wemidziyo yemagetsi uye mabhatiri akashandisa mushandirapamwe wezita rezororo umo kuvhenekera kwekuvhenekera kwakaburitswa padura remapakeji avo mune yavo tema-color uye maturu esimba Kudzvanya iyo CTA yakatungamira vatengi kune chinotsvedza chiitiko, nemagetsi ezororo akasungirirwa pamusoro, kwaunogona kutenga kuburikidza nhatu dzakasiyana madhiri. Kuenderera mberi nekubatana kwakaita kuti vataridzi vaone peji yezvigadzirwa uye nzvimbo yechitoro kuti vawane mutengesi wepedyo anotengesa zvigadzirwa zvavo. Mushandirapamwe uyu wakaita basa rakakura rekubatanidza hupfumi midhiya mhenyu uye kudyidzana kugadzira chinhu chinobata chinotungamira chigadzirwa / dhizaini yekuziva, pamwe nechishandiso chikuru chekutsvaga mutengesi ari padyo.